ScienceOpen sy ny University of South Africa Press dia nandefa ny mpizara mialoha ny UnisaRxiv - AfricaArXiv
navoakan'ny Johanssen Obanda on 25 Janoary 2021 25 Janoary 2021
Ny tahiry mpiara-miasa aminay ScienceOpen dia niara-niasa tamin'ny University of South Africa (UNISA) Press mamorona ny mpizara mialoha UnisaRxiv. UnisaRxiv dia sehatra fiadian-kevitra hanamorana ny fandinihan'ny peer ny sora-tanana mialoha ny sora-tanana ary hahafahana manaparitaka haingana ny zavatra hita farany amin'ny lohahevitra samihafa.
Ny fiaraha-miasa amin'ny ScienceOpen dia miteraka vintana lehibe ho an'ny Unisa Press hanehoana ny fahavononany hanokatra siansa. Ho fanampin'izany, ity fiaraha-miasa ity dia manohana ny ezaka ataontsika amin'ny fanomezana haitao farany manatsara ny fanaparitahana haingana ny fikarohana amin'ny fomba mangarahara, miorina amin'ny kalitao sy ny fahaiza-manao. Ireo mpiasa matihanina, mpampianatra anay ary ireo mpianatra nahazo diplaoma dia afaka mirehareha amin'ny fahafantarana fa ny asan'izy ireo dia manana fotoana izao hampiantranoana amin'ny sehatra iray izay manokatra ny fikarohana ataon'izy ireo handinihan'ny manam-pahaizana manokana sy ny fanehoan-kevitra, izay hanatsara ny kalitaon'ny asan'izy ireo. Faly aho fa ny Unisa Press dia mitondra an'ity sehatra ity tsy ho an'ireo mpandray anjara ao amin'ny Unisa ihany fa any amin'ny kaontinanta afrikanina rehetra.
Dr. Meiya G. Nthoesane, talen'ny Unisa Press
Vakio ny fanambaràna tany am-boalohany blog.scienceopen.com/2021/01/unisarxiv/
Momba ny Unisa Press
The University of South Africa (Unisa) dia miorina ao Pretoria, iray amin'ireo renivohitra telo any Afrika atsimo, ary mahatratra mpianatra 400,000 XNUMX eo ho eo. Unisa Press dia ao anatin'ny Unisa's Research, Postgraduate Studies, Innovation and Commercialization Portfolio ary gazety oniversite lehibe indrindra eto Afrika, mamoaka boky sy gazety.
ScienceOpen dia sehatra fahitana ifanakalozana ho an'ny fikarohana ataon'ny manam-pahaizana amin'ny taranja rehetra. Manomboka amin'ny fikarohana marani-tsaina sy maro an'isa ka hatrany amin'ny fanangonana fikarohana, famerenana ny famerenan'ny mpiara-belona, ​​famintinana laika ary maro hafa, dia manome safidy feno feno hahitana sy hizarana ny valin'ny fikarohana. | Tranonkala: scienceopen.com
Ny ScienceOpen dia mandray anjara amin'ny fifandraisana manam-pahaizana any Afrika amin'ny fanoloran-tena amin'ny Open Science sy ny Open Access amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fandinihana peer, be sy be, mangarahara ary tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny lahatsoratra navoaka, ary amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo mari-pahaizana nomerika maimaimpoana ho an'ny mpikaroka.
Fiaraha-miasa amin'ny AfricaArXiv miaraka amin'ny ScienceOpen
Ianaro ny fomba fandefasana amin'ny AfricaArXiv amin'ny alàlan'ny ScienceOpen
Vakio ny fanambarantsika fiaraha-miasa amin'ny africarxiv.org/scienceopen-partnership/
Zahao ny fanangonana ScienceOpen an'ny COVID-19 avy sy ny manodidina an'i Afrika scienceopen.com/collection/COVID19_Africa
Jereo ny atiny AfricaArXiv ao amin'ny ScienceOpen izay natolotra tao aminay ScienceOpen fanangonana amin'ny scienceopen.com/collection/2a0d303c-24e0-4a42-a13d-3484c5df6cc0
Sokajy:	fiaraha-miasaOpen AccessFampandrenesana momba ny fiaraha-miasa